MUHIIM: Aragtida Maamulka Man United Ee Tababare Solskjaer & Haddii Ay Caydhinayaan Oo Xog La Sugayay Laga Helay - GOOL24.NET
MUHIIM: Aragtida Maamulka Man United Ee Tababare Solskjaer & Haddii Ay Caydhinayaan Oo Xog La Sugayay Laga Helay
Waxa xog laga helayaa jagada tababarenimo ee kooxda Manchester United oo uu culays ku saaran yahay tababare Ole Gunnar Solskjaer iyo halka ay maamulka sarre ee kooxdaasi ka joogaan.
Guuldarro kale oo 4-2 ah oo ay kala kulmeen kooxda Leicester City shalayto ayaa sii kordhisay culayska saaran tababaraha Norwegian-ka ah, fashilkaas ayaa meesha ka saaraya hammigoodii horyaalka iyaga oo aan wali ciyaarin kulan ay kahor tageen shanta kooxood ee kale ee kula jira liiska “Lixda Kooxood Ee Sarre”.
Si kastaba, Ole Gunnar Solskjaer ayaan shaqada kooxdaas laga caydhin doonin wuxuuna kalsooni 100% ah ka haystaa maamulka sarre ee Man United sida uu sheegago wargeyska xogtiisa lagu kalsoonaan karo ee The Athletic.
Saxafi David Orniesten oo ah midka xogtan helay ayaa sheegaya in boodhka Red Devils ay amaan badan u hayaan Ole Gunnar iyo shaqada uu qabtay mudada uu kooxda joogat.
Kaddib markii suuqii xagaaga ay si fiican uga dhex muuqdeen iyaga oo lasoo saxeexday Jadon Sancho, Raphael Varane iyo Cristiano Ronaldo ayay u muuqdeen kuwo u tartami doona horyaalka balse waxay u muuqdaan kuwo aan la heer ahayn Liverpool, Manchester City iyo Chelsea.
Man United ayaa haatan dhexda kaga jirta tiro kulamo ah oo xoogan waxaana kamid ah Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal iyo Tottenham oo kamida sagaalka kulan ee kusoo socda.
Solskjaer ayaa shaqada Old Trafford si kumeel gaadh ah loogu dhiibay bishii December 2018 balse waxa uu rasmi ula wareegay March 2019, Heshiis cusub oo saddex sano oo kale ah ayuu saxeexay saddex bilood kahor.